Forum serasera malagasy Mpampianatra sy Raiamandreny - Dinika forum.serasera.org
Mpampianatra sy Raiamandreny
Fitohizan'ny hafatra : Mpampianatra sy Raiamandreny
kalt - 01/11/2003 14:53
Fa maninona ny Mpampianatra foana no mahazo tsiny eo @ tsy fahombiazan'ny mpianatra ?.Tsy mba tompon'andraikitra koa ve ny Mpianatra sy ny Raiamandreny ?.
xxx - 03/11/2003 18:43
Mahazo tsiny voalohany indrindra ny Mpampianatra satria e izany hoe "mpampianatra". Io no asany eo @ androm-piainany. Ny tsikaritra anefa dia azo isaina @ ratsan-tànana ny tena mendrika io anaran'io @zao fotana. Resaka "pédagogie moa dia tsy ao intsony. Conscience professionnelle tsy lazaina intsony. Ohatra mahatonga fanontaniana maro be ity : mampanao "cours payés" ao am-pianarana na ivelan'ny toeram-pianarana nefa ny tena antony anaovany an'ilay izy nohon'ny fitiavam-bola diso tafahoatra fa tsy ilay hoe satria misy elanelany be ny niveau-n'ireo mpianany. Ny tena loza aza dia vao mainka hataony lalina be ny elanelana eo @mpianany mba hisongadina izay manao "cours" aminy sy tsy manao. Rehefa manadina @ fanadinana izy dia izay nataony tany @ cours payés farany no ataony sujet ho an'ny daholo be ao an-dakilasiny. Tsy azo lazaina hoe mpampianatra mpamosavy ve izany?
hatreo aloha androany.
rfanjav - 03/11/2003 16:37
Tena marina izany voalazan'ny X izany,
fa ny tiako tenenina dia izao,
vitsy dia vitsy @ izao fotoana izao ny ray aman-dreny maharaka ny fianaran'ny zanany izany fa dia izay vitany tany am-pianarana ihany, izany hoe miankina tanteraka @ izay ataon'ny mpampianatra fotsiny izany.
marina fa samy tompon'andraikitra dahlo (toko telo mahasa-nahandro) nefa ny androatokon'ny fiainan'ny mpianatra dia any am-pianarana fa tsy any an-trano,
xxx - 04/11/2003 16:50
Izao anefa.Ny adidin'ny mpampianatra any am-pianarana dia manabe sy manazava ny lesona rehetra.Tsy ho hain'ny mpianatra anefa izany lesona izany raha tsy hianarana ka ny manara-maso izany no tokony andraikitry ny raiamandreny raha tsy izany mandeha ila ny fanabeazana.
rfanjav - 04/11/2003 14:53
vitsy dia vitsy anefa ny RAR mahavita an'izany, surtout hoe miasa,
eh ny anarany hoe mpampianatra,
tsimisitoazy - 05/11/2003 21:46
samy tompnandraikitra daholo ny rehetra anjaran'ny ray amandreny ny manaramaso ny zanaka any antrano raha tsy afaka izy ireo tokony tsy anararaotra ny zanaka fa tokony hieritreritkely fotsiny hoe raha omena fahafahana aho dia ataoko mifanaraka izany ny zavatra ho atoko indrindra ny fianarana ny mpampianatra anie mameno izay tsy ampy any antrano sy manome fanabehazana fa anjaran'ny ankizy no mandray azy
rfanjav - 05/11/2003 20:31
Marina izany, nefa vitsy ho'aho ny RAR mahavita an'izany,
ary aiza hoy ianareo no ahaizan'ny mpianatra zavatra betsaka indridra, TSY ANY AM-PIANARANA, na ny zavatra tsy mbola tokony ho fantany aza,
tsy miteny aho hoe ny mpampianatra no manoro azy an'izany fa kosa anjaran'ny mpampianatra no mi-surveiller ny tontolo iainan'ny mpianatra rehefa any @ sehatra iasany!
rfanjav - 05/11/2003 20:32
xxx - 06/11/2003 16:24
Arakaraky ny taonan'ilay mpianatra koa io ka. Raha ohatra kosa ve olona efa hanala baka ka tsy mahomby dia homena tsiny ve ny ray aman-dreny ve na ny mpampianatra ?
rfanjav - 07/11/2003 11:54
Eny e, raha mpianatra efa lehibe kosa, azy manokana ny responsablité
fa ho an'ny zaza madinika no noresahiko teo,
oupsyyy - 21/11/2003 17:24
Marina ny tenen i rfanjav, misy am fampianarana de betsaka ny factuers tokony ho jerena raha ny tsy fahombiazan'ny ankizy iray, ohatra ny tontolo misy azy eo anivon'ny fianakaviny, efa nisaraka ve ny RAR ny, etc, mi influencer ny ankizy zany rehetra zany, hany ka misy fiantraikany amin ny fianarany.
Donc, na ny RAR na ny mpampianatra concernés daolo.
moi - 25/11/2003 20:40
Amiko indray, raha ny fampitàna fahalalàna (connaissances) dia ny mpampianatra no heveriko ho manana andraikitra, sy mahay an'izay kokoa ! Fa misy aloha mpampianatra tsy mahay e !
Ny RAR indray : Vitsy ny maharaka ny hoe hampiana-janaka izany, fa ny mpianatra ankehitriny be kilalao.
Fa raha fampitàna fahendrena kosa, dia ny RAR no heveriko ho tompon'andraikitra kokoa !
Ny RAR manana fahefana hiteny, eny hikapoka aza, nefa dia tsinontsinoavina ilay torolàlan'ny Soratra Masina hoe Aza itsitsiana tsora-kazo ny zaza ! Ny RAR indray no tsy sahy, na be sentiment ! Aoke re fa sarotra izy ity e ! Fa mifampiankina ny fitaizana, tsy an'ny mpampianatra irery, na an'ny RAR, fa antsika rehetra.
rfanjav - 26/11/2003 19:24
Toko telo mahasa-nahandro io,
oupsyyy - 28/11/2003 14:35
Ary irariany mba ho tena maska le andrahona eo amin ny toko fa tsy ho mohaka ka ny ankizy ndray no tsy ho vanona.
rinakely1 - 29/11/2003 15:03
mpampianatra natao mba hampita fahalalana maro @ mpianatra ka raha tsy mahomby ary ny méthode-ny d very ny mpianatra.
Ny mpianatra tsy tokony hionona fotsiny @zé omen'ny mpampianatra fa mba tokony anao fikarohana indrindra refa tsy mahazo zé atao any an-tsekoly.
Ny ray aman-dreny tsy tokony hanakiana foana na ny mpianatra na ny mpampianatra fa mba tokony mi-comprendre we inn ary ny olana misy !
mars - 01/12/2003 16:26
Raha mbola kely ny ankizy dia tena andraikitry ny mpampianatra mihitsy ny fanabeazana azy marina fa manana adidy amin'izany ni R.A.D saingy matoa nampidiriny an-tsekoly ny zanany dia tsy vitany izany asa izany ,ny fiainana efa sarotra rahateo. Ny mpampianatra dia olona efa voatokana amin'ny fampitam-pahalalana sy ny fanabeazana ny ankizy, manana ny pedagogie momba izany izy ary tokony hanana notion @ ny psychologien'ny ankizy rariny raha omena tsiny izy amin'ny tsy fahombiazana .Fa rehefa lehibe ny mpianatra dia tompon-tsafidy amin'ny ho aviny koa raha mba efa nanao izay vita tamin'ny fanitsiana am-pitiavana izay diso ny mpanabe dia vita ny anjarany fa an'ny mpianatra sisa ny hadisoana;izao koa e! ny mpianatra anie misy mahavita manao bulletin sandoka sns mandritry ny taom-pianarana ka tsy fantatry ny RADmihitsy izay tena marina e! efa tapitra ny taona vao hita fa tsy nisondrotra kay ny zanany na hafahafa noho izany ;an'iza ary ny tsiny moa tsy tokony ho adidinareo eo amin'ny sehatry ny fanabeazana no mikaroka izay fomba rehetra hisorohana ny fisandohana toy ny fitakiana ny CINny RAD raha toa misy tokony hiantsoana ny RAD na koa mahatsikaritra fa mety ho ratsiratsy fitondrantena ny mpianatra any an-tsekoly na tsy mahomby. Misy anie ankizy mody jomoka any an-trano nefa any ivelany tena...
vetso - 06/12/2003 10:15
Samy manana ny anjara toerany sy ny anjara asany ny mpampianatra sy ny raiamandreny ary ny mpianatra mba hahatomombana ny fanabeazana. Toko telo mahamasa-nahandro ireo. Tsy tokony hohadinoina koa anefa ny anjara toeran'ny fiaraha-monina sy ny tontolo iainana. Ny herivelona rehetra mihitsy no tokony hiaina ny fanahin'ny fahatsiarovantena ka samy handray ny andraikitra manandrify azy avy. Ny manandrify tsy mba miolaka. Koa raha sendra misy toko tapaka na vilany mitongilana dia iaraha-mikaroka ny fanarenana azy hisorohana ny tsy fahombiazana.
herry - 09/12/2003 16:29
Raha vao tsy mahay ny ankizy iray dia ny mpampianatra foana no mahazo tsiny.Na avy @ ilay ankizy aza no tsy mampahay azy dia ny mpampianatra foana no diso.Tokony arahana maso ny ankizy na mianatra na tsia ny lesona.Fa tsy vitan'ny hoe mankany an-tsekoly isan'andro ny ankizy dia izay.
fijo - 09/01/2004 10:07
marina io voalazan drahery io,ary adidin'ny ray amandreny izany.mba hitsarana ilay mpampianatra koa,dia ny mpianatra rehetra no tokony jerena hoe manao ahoana amin'io prof io,fa tsy hoe,tsy mamely ny zanako satria ny prof ratsy.
xxx - 17/01/2004 13:56
Aza hodian-tsy hita koa fa ny ankamaroan´ny ray aman-dreny anie ka kely lavitra noho ny fahalalan-janany ny fahalalany e, @ fomba ahoana moa no anarahany maso ny fianaran-janany @ zany. Ary na misy aza ny ray aman-dreny nahita fianarana, tsy mitovy ny zavatra ianaran´ny zanany @ zao sy ny nianarany aloha. Mety hifanipaka @ méthode´ny mpampianatra ny fomba hampianarany ny zanany any an-trano raha mba manampy izy, vao maika mikorontana ny sain´ny ankizy.
Rariny dia rariny raha omena tsiny ny mpampianatra raha tsy mahomby ny mpianatra satria anjarany ny mampianatra. Ny ankamaroan´izy ireo koa, indrindra ny mpampianatry ny sekolim-panjakana dia tsy mahatsapa fa adidiny ilay mampianatra fa toa didy ho azy ka atao fotsiny zay hahavita azy, zara raha vita e. Hoy ny sasany zany hoe: na mandeha io na tsy mandeha tsy mampihena ny karama isam-bolany. Dia hanaona ny ho avin´ny zaza malagasy tsy afaka ny hianatra any @ sekoly andoavam-bola????
Misy ihany koa nefa reo mpampianatra zay manao ny asany ara-dalàna saingy vitsy an´isa.